Download DeHavilland DHC 7 VC ho an'ny Passenger Edition FS2004 - Rikoooo
DeHavilland DHC 7 VC miorina Mpandeha Edition FS2004
Downloads 10 941
Mpanoratra: Milton Shupe, Scott Thomas, Joao Paz, et zanak'i de Aaron fisolokiana
Modely ao Gmax io dia perla mainty tena izy.! Ity fanampim-panazavana ity dia vita hatramin'ny farany miaraka amin'ireo antsipiriany kely indrindra. Ny kabine 3D misy cocktail tena tsara dia miasa tanteraka.
Ny endri-javatra miavaka indrindra dia: ny ampahany betsaka, ny jiro, ny serivisy sy ny mpandeha dia mivoaka amin'ny tohatra fiandrasam-pahefana, taila bumper, accessories, fiaramanidina virtoaly. Fiaramanidina tsara tarehy mitazona fitaovam-piaramanidina (fiarandalamby kesika), fiarakodia miverina, ary realistical STOL sidina fiaramanidina notsongaina tamin'ny pilotin'i 6real, peo tsara feo sy ny sisa ...
Ity maimaim-poana ity dia iray amin'ireo kalitao avo indrindra: maka izany avy hatrany.
Tora-bato roa no misy.
Mitandrema, azafady mba vakio ny boky momba ny sidina sy ny taratasy rehetra natolony.
Ny DeHavilland Kanada DHC-7, izay antsoina koa hoe Dash 7, dia fandefasana fandefasana fandefasana fiaramanidina sivily efatra (PW PT6). Natao tao amin'ny 1975 ilay mpamorona ny De Havilland Canada ary natomboka tamin'ny famokarana hatramin'ny 1988. Rehefa nividy ny orinasa 111 i Boeing dia natsangana. Tsy dia nihaona tamin'ny tsenam-barotra izy io fa kosa natao ho an'ny fampandrosoana an'i Dash 8 tatỳ aoriana. (Source Wikipedia)
De Havilland DH-80A Puss Samoina FS2004
Dehavilland Bombardier Dash8-Q311 - Islandey Coast Mpiambina FS2004
DeHavilland Vikings DHC6-400 Twin Otter FS2004